TSENA MORA AO TOAMASINA : Nanomboka ny sabotsy teo ny fivarotana vary mora
Toamasina no natao filamatra amin’ny fizaràna vary mora. Nosokafana ny sabotsy 23 marsa lasa teo ny Tsena mora ao Toamasina. 24 mars 2019
Fotoana izay nanomboka nivarotana ny vary mora. Miisa 22 ireo toeram-pivarotana voatokana amin’izany. Noferana ho 1 000 Ariary ny iray kilao. Telo kilao isaky ny karinem-pokontany no azo jifaina. Tonga nanokatra izany ny Minisitry ny Indostria sy ny varotra ary ny asatanana, Rakotomalala Lantosoa.
Niara-dia taminy ny mpiandraikitra ny Tsena mora eto Madagasikara, Charly. Nanotrona ihany koa ny Minisitry ny Mponina teo aloha, Naharimamy Lucien Irmah. Nanambara ny Minisitry ny Indostria sy ny varotra ary ny asa tanana fa isaky ny alarobia sy sabotsy no ivarotana io vary mora io.
Misokatra manomboka amin’ny 8 ora sy sasany maraina ny tsena. Nahitsy kosa izy niteny fa mila mipaka any amin’ny vahoaka ireo vary mora ireo, ka nampitandrina an’izay mikasa hanodinkodina izany ny minisitra. Vary mora izay fampanantenana nataon’ny Filoha Rajoelina fony izy mbola kandidà nifaninana ho Filoham-pirenena.